भरियाबाट ‘अल्ट्रा धावक’ (जितको तालिका सहित) – आफ्नो प्रेरक संसार
Bibas chetan — ४ जेष्ठ २०७५, शुक्रबार ११:५४2comments
सुमन कुलुङ (२६ वर्ष) लाई आफू म्याराथुन अल्ट्रा धावक बन्छु भन्ने कल्पनै थिएन । महाकुलुङ गाउपालिका ५, गुदेल सोलुखुम्बुको पहाडी कुना कन्दरामा उकालो ओरालो नुहने कुरै भएन । त्यही कुना कन्दरामा जन्मेका उनी मेलापात र गोठाला मात्र नभई स्कुल जादा पनि हिड्ने कम दौडिने बढि गर्थे । स्कुल र गाउ“मा आयोजित दौड प्रतियोगितामा उनी सधै अरुलाई पछाडी पार्थे ।
क्र.सं आयोजक स्थान दुरी समय नतिजा मिती
१ सुनराईजिङ युवा क्लव गुदेल २१ किमी २ घ ३४ मि ५८ से प्रथम २०६९/९/९
२ हिमचुली युवा एकता क्लव बुङ २३.५ किमी २ घ २१. ३४ से द्धितिय २०६९/९/१२
३ भिजनखा उतिसघारी उपभोक्ता समिति छेस्काम २६ किमी २ घ २ मि प्रथम २०६९/१०/१६
४ जिल्ला खेलकुद विकास समिति कास्की पोखरा ५ किमी तृतिय
५ जिल्ला खेलकुन विकास समिति सोलु सल्लेरी १० किमी प्रथम
६ जिल्ला खेलकुद विकास समिति सोलु सल्लेरी ५ किमी प्रथम
७ नेपाल शेर्पा विद्यार्थी मञ्च सल्लेरी, ७ किमी ४१ मिनेट १० से प्रथम २०७२/१०/२९
८ ज्युब्युस एलाईन्स जुभिङ प्रथम २०७३/९/३०
९ मार्टिर मेमोरियल एग्रिकल्चर ग्रुप बुङ प्रथम
१ण् अन्नपुर्ण १०० किमी पोखरा १०० किमी ११ घ ११ मि द्धितिय सन् १०१५
११ हिमालयन भोलन्टियर पोखरा १२ किमी प्रथम सन् २०१५
१२ एभरेष्ट म्याराथन नाम्चे ४२ किमी ३ घ ४३ मि ५७ से प्रथम २०७४ बैसाख १६
१३ अक्फार्म टे«यल वाल्कर हङकङ १०० किमी १५ घ ५ मिनेट सहभागि सन् २०१५
१४ सोलु एफ एफमको स्थापना दिवस सल्लेरी प्रथम
१५ सिन्धुपाल्चोक अन्तराष्ट्रिय ट्रायल सिन्धुपाल्चोक ३२ किमी प्रथम
१६ एभरेष्ट म्याराथन नाम्चे ४२ किमी तृतिय सन् २०१४
१७ एभरेष्ट म्याराथन नाम्चे ४२ किमी तृतिय सन् २०१६
घरको गरिबि र सानैदेखि ट्रेकिङमा भारी बोक्न जाने चलनले सुमनको पिठ्यूमा पनि टुरिस्टको झोला भिर्न बाध्य बनायो । कक्षा ५ मै पढाई छाडे । स्कुल पढ्ने उमेरमा खुम्बुक्षेत्रमा पर्यटकको भारी बोक्न गए । भारी बोक्ने क्रममा उनले ‘एभरेष्ट म्याराथनका संस्करणहरु देखे । उनलाई पनि प्रतियोगितामा सहभागी हुने रहर लाग्यो । रहरलाई कसले छेक्न सक्छ र, उनी एभरेष्ट म्याराथन २०१४ र ०१६ मा उनी तेश्रो भए । उनको मेहनतले सन् २०१७ को एभरेष्ट म्याराथन विजेता बने ।
सगरमाथा आधारशिविरदेखि नाम्चेसम्मको ४२ किलोमिटर दुरी उनले ३ घण्टा ४३ मिनेट ५७ सेकेन्डमा पार गरे । खुम्बुक्षेत्रमै हुने ‘रोयल पेन्गुइन रेस’ को सन् २०१६ र २०१७ को उपाधि जिते । जुन दौड नाम्चेदेखि गोक्यो हु“दै रेन्जोला पास गरेर फर्किनुपर्ने हुन्छ । जम्मा ५२ किमी दुरी पार गर्दा ५ हजार ३ सय ५० मिटर सम्म उचाईमा पुग्नु पर्छ ।
भर्खरै सम्पन्न ‘हिमालयन गाइड पाथीभर म्याराथन २०१८’ को उपाधि पनि सुमनले जिते । उनले फुङलिङदेखि पाथीभरा सम्मको ४७ किलोमिटर दुरी ४ घण्टा १९ मिनेट ५० सेकेन्डमा पार गरे । ‘पोखरा ट्रेल रेस’को उपाधि लगातार २ पटक जितिसकेका छन् । हङकङको दुईवटा ट्रेल रेसमा चारपटक सहभागी भईसकेका छन् । गत सालमात्रै हङकङको ‘भिब्र्याम ट्रेल रेस’ मा उनी ७ औं भए । ६० देशका २ हजार धावक प्रतियोगितामा सहभागी थिए । १ हजार १ मिटर उचाईको १ सय किलोमिटर दुरीको रे उनले १० घण्टा ३८ मिनेटमा पार गरे ।
हङकङमै भएको ‘अक्सफाम ट्रेल वाकर’मा उनी दुईपटक सहभागी भईसकेका छन् । त्यो पनि १ सय किलोमिटरकै हो । उनी चीनमा आयोजित विभिन्न ट्रेल रेसमा प्रतियोगिको रुपमा सहभागी भईसकेका छन् । उनलाई म्याराथनमा हौसला दिने व्यक्ति पोखराका रमेश भट्टचन हुन् । उनले अन्नपूर्ण सर्किटमा हुने म्याराथनमा सहभागी गराउनेमात्र गरेनन् । लगातार तालिम दिईरहे । उनले भट्टचनसग ४ वर्ष सम्म तालिम लिएका छन् ।
सुमन अहिले पनि पर्यटकीय सिजनको बेला ट्रेकिङमा जान्छन् । बाकी समय दौडिने र प्रतियोगिताहरुमा सहभागी हुदै बित्छ । ‘मलाई पहिलो रहर भनेको एभरेष्ट म्याराथन र रोयल पेन्गुइनमा ह्याट्रिक गर्नुछ ।’ उनले भने, ‘त्यसपछि अवसर मिल्यो भने अन्य अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगितामा उपाधिका लागि दौडिनेछु ।’ उनले जति कोशिस गरेका छन्, त्यो सबै व्यक्तिगत इच्छा र रहरले मात्र गरेका हुन् ।
चार भाई एक बहिनी मध्येका माहिला सुमनले शरिरले साथ दिए सम्म म्याराथन दौडमै जीवन बिताउने सोचेका छन् । ‘ज्यूनका लागि अरु पेशा अपनाएपनि मेरो मूख्य काम धावककै रुपमा दौडिने सोच छ ।’ सुमनले भने, ‘कम्तिमा राष्ट्रलाई दौडेरै चिनाउने रहर छ ।’
-कुम्भराज राई/विवश कुलुङ
चन्द्रसिंह कुलुंग says:
सुमन कुलुंग प्रति कुलुंग समुदाय गर्व गर्दछ.
Pingback: दौडबाट जितेको पैसाले विहिनीहरु पढाउदै निरकला कुलुङ – आफ्नो समाचार